Maitiro Ekuverenga Kudzoka pane Yako Yemagariro Media Kushambadzira Investment | Martech Zone
Maitiro Ekuverenga Kudzoka pane Yako Yemagariro Media Kushambadzira Investment
Muvhuro, Nyamavhuvhu 27, 2018 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Sevashambadziri uye mapuratifomu enhau ekukura, isu tiri kuwana zvakawanda zvakawanda pamusoro pekumusoro nekudzikira kwekudyara munhau dzezvemagariro. Uchaona kuti ini ndinogara ndichitsoropodza tarisiro yakatarwa nevanoona vezvenhau - asi hazvireve kuti ndiri kutsoropodza vezvenhau. Ini ndinochengetedza matani enguva uye kushanda nekugovana huchenjeri nevezera rako uye nekukurukura nemhando pamhepo. Ini handina mubvunzo kuti nguva yangu yandakapedza pasocial media yakange iri mari inoshamisa yekambani yangu, kutsikisa kwangu, nebasa rangu.
Iyo nyaya inyaya yezvose zvinotarisirwa uye kuyerwa, hazvo. Heino muenzaniso: Mutengi anonyunyuta kuburikidza neTwitter uye kambani inopindura nekukasira, ichinyatso kugadzirisa nyaya yemutengi nenzira yakanaka uye yakakodzera. Vateereri vevatengi ivavo vanoona hunhu uye iye zvino vane chimiro chakanaka chekambani. Iwe unoyera sei iyo inodzoka pane investment? Nekufamba kwenguva, iwe unogona nekuyera nemanzwiro echiratidzo chako uye uchibatanidza izvo kune yakazara mari nekuchengetwa… asi hazvisi nyore.
44% yeCMOs vanoti havana kukwanisa kuyera mhedzisiro yemagariro enhau pane bhizinesi ravo. Nekudaro, zvinokwanisika zvachose kumafemu emarudzi ese
Kazhinji kazhinji kwete, makambani anoda kuyera pasocial media kushambadzira ROI nekunongedzera zvakananga kurodha pasi, demo, kunyoreswa, kana kutengesa kune iyo Tweet kana Facebook yekuvandudza. Nepo ichi chiri icho chakasarudzika chinowanzoitika chinzvimbo chemagariro enhau ROI, hazviwanzo kuve zvinonzwisisika Tarisiro yako iri kuenda pasocial media kuti utenge chigadzirwa chako kana sevhisi? Yakanyanya kusahadzika mumaindasitiri mazhinji - kunyangwe ichingoitika nguva nenguva.
4 Matanho Ekuyera Kudzoka paInvesment yeSocial Media Kushambadzira
Ramba uchifunga kuti haugone kunge uine izvi panzvimbo panguva yaunofunga kutanga kuyera. Zvinogona kuda kuti iwe ugadzire zviwanikwa uye bhajeti yekushandira pasocial media kweinenge mwedzi mishoma kuti uone kuti kudzoka kwako chii.
Tsanangura Zvinangwa Zvinoyerwa - Zvinogona kuve zvakapusa sekuvaka ruzivo kana kuenda zvakanyanya mberi mukuita, masimba ekuvaka, kutendeuka, kuchengetedza, kusimudzira, kana kugadzirisa ruzivo rwevatengi.
Govera kukosha kune chimwe nechimwe Chiito - Iri ibasa rakaoma, asi chii chakakosha kudzidzisa, kuita, uye kusevha vatengi vako pasocial media? Zvichida kupatsanura tarisiro yako nevatengi - uchienzanisa avo vanotevera uye vanobatana newe pamhepo vachipesana nevaya vasingadaro. Paive nekuwedzera kwekuchengetedza here? Kuwedzera upsell mikana? Inokurumidza nguva yekuvhara? Hukuru kukura kwezvibvumirano?
Verenga Mutengo weKuedza Kwako - Inguva yakareba zvakadii uye zvinoshandura sei kune mushandi uye manejimendi anobhadhara? Marii yauri kushandisa papuratifomu kugadzirisa pasocial media? Marii yauri kushandisa iwe kudzosera kana kudzikisira nyaya dzevatengi? Uri kushandisa chero mari kutsvagisa, kudzidzisa, misangano, nezvimwe? Zvese izvi zvinofanirwa kuverengerwa mune chero ROI kuverenga.
Sarudza iyo ROI - ((Yese Mitero Yakapihwa kuSocial Media - Yese Yemagariro Midhiya Mari) x 100) / Yese Yemagariro Midhiya Mari.
Heano akazara infographic kubva MDG, inovhara maitiro ekutsanangudza zvinangwa zvinogona kuyerwa, kupa kukosha kune chimwe nechimwe chiitiko, uye kuverenga mutengo wakazara wezvaunoita Maitiro Ekuyera Zvemagariro Midhiya ROI:
Tags: infographicmdgdzoka pakudyaraRoyimagariro enhausocial media chiitikosocial media mutengopasocial media infographicpasocial media roipasocial media kukosha
Mashandisiro Aungaita yako yeMartech Stack Kushandira Mutengi
Musiyano Pakati peSEO Uye SEM, Maitiro maviri Ekutora Traffic Kune Yako Webhusaiti